Warar Dheeraad ah oo laga Helayo Diyaarad ku Dhacday Afgoye – Radio Daljir
Warar Dheeraad ah oo laga Helayo Diyaarad ku Dhacday Afgoye
Oktoobar 29, 2015 5:20 b 0
Oktoobar 29, 2015 (Daljir) — :faah faahin ayaa kasoo baxaysa diyaarad shalay ku dhacdan deegaanka Cumar Bashiir oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Deegaanka diyaarada ay ku dhacday oo qiyaastii 6-km u jira degmada Afgooye ayaa waxaa ka taliya ururka Al-shabaab oo ka horjeeda Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM ee taageeraya.
Sida dad goob joogayaal ah oo diiday in magacooda warbaahinta loo adeegsado ay sheegeen,diyaarada ayaa ku dhawaad waxaa ka soo degay ilaa iyo 10-rakaab ah,kuwaasi oo diyaarada saarnaa,waxaana la ogeyn in Al-shabaab ay la wareegeen rakaabka iyo agabkii kale ee diyaarada saarnaa iyo in kale.
Maamulka Gobolka Sh/hoose oo arintaan ka hadlay ayaa beeniyay in diyaarada iyo rakaabkaba ay heystaan ururka Al-shabaab,islamarkaana hada iyagu ay kor kala socdaan.
Waxayna hoosta ka xariiqeen in hada la qorsheynayo in Ciidamo ka tirsan Dowlada Federaalka Soomaaliya oo kaashanaya AMISOM ay gaaraan deegaanka Cumar Beere oo ah halka diyaarada ay ku dhacday.
Afhayeenka maamulka Gobolka Sh/hoose Max’ed Shiino ayaa beeniyay in ururka Al-shabaab ay la wareegeen diyaarada,isagoo hadalkiisa intaasi ku daray in mas’uuliyiin ka socda Dowlada Federaalka halkaasi gaari doonaan.
Warbaahinta qaarkood ayaa qoraya in 12-ka mid ahaa rakaabkii saarnaa diyaarada ay gacanta ku dhigeen Kooxda Al-shabaab,walina wax war ah Shabaab dhankooda kama soo bixin oo arintaan ku saabsan.
Puntland oo Albaabada Isugu Dhufatay Xafiiskii VOA-da ee Gobolka